Ntuziaka Site na Semalt: Nzọụkwụ Atọ Ịhazi Afọ Ọdịnaya
Ọ na-esiri ndị nwe ụlọ ọrụ ike ịhazi na ịmepụta ọdịnaya maka ndị ọrụ ha,mgbe ha na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. Otú ọ dị, ọ ka na-ekwe omume mgbe niile iji jikwaa ọdịnaya nke weebụsaịtị
Max Bell, Onye Ọrụ Nchịkọta Ahịa nke Ọkachamara ,ndụmọdụ ndị na-esonụ usoro itoolu dịka nduzi maka inweta ma bipụtapụta ọdịnaya ziri ezi
1. Nyochaa nchịkọta nke oge a
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, nyocha nke akwụkwọ a dị ugbu a dị ka ọ na-egosipụtanjehie ma ọ bụ ihe ndị dị mkpa ka emelite. Ịmepụta ọdịnaya na ịnye ebumnuche a kapịrị ọnụ maka ìgwè ndị a na-eme ka ọ dịkwuo mfehụ na saịtị ahụ na-enye ihe bara uru naanị.
2. Chọpụta ndị na-ege ntị
Azụmahịa kwesịrị ịma onye ọ na-ekwu tupu ya ekee ọdịnaya - horgen fasnacht 2018. Ịghọtama ọ bụ ịmepụta ndị na-ege ntị na-enyere ndị mmadụ aka ịkọwa ihe n'oge a na-eme atụmatụ. Ọ na-agbagha ma ozi onye na-ezube itinyedị mkpa ma ọ bụ dị oke ezu. Ọ na-egosiputa ndị isi, nke abụọ, na ndị na-ahụ maka ndị isi obodo iji hụ na saịtị ahụ na-enweta ihe niilendị ọbịa ya.
3. Jiri Sitemaps
Sitemap na-eme dị ka ihe osise. Na-enweghị ya, saịtị enweghi ike imezu ihe niile ọ chọrọma ọ bụ kenye ọdịnaya gaa na ya dị mkpa. Ọtụtụ ihe omume dị iche iche na ngwungwu ngwanrọ dị iche iche iji nyere ha aka ịhazi ma hazie ozi na amkpokọta. Ihe atụ dị otú ahụ dị ka Chaatị Òtù na Microsoft Word na ngwaọrụ XMind na-enweghị ike ịfe. Malite na nnukwuọdịnaya iji chọpụta ma ọ bụrụ na otu peeji nwere ike ịnweta ya niile ma ọ bụ nwere ike ịchọta subpages. Site n'ime ihe a nile, ọ ga-ekwe omume ịhazi ihe namegharia ihe na weebụsaịtị.
4. Iso ndị ọzọ na-emekọrịta ihe
Inye ndị ọzọ na nyocha na idezi na-emesi obi ike na ọdịnaya nwereenweghị mmehie na-arụ ọrụ ma na-echebara ndị ọzọ echiche. Mmekọrịta na-enye ndị ọzọ aka itinye aka..Nanị faịlụ maka ọdịnaya niile ejirienwere ike inwe mmekọrịta ndị a na ndị na-emepụta ọdịnaya chọrọ izere ya. Ndị Google Docs na JumpChart bụ mmekorita ụlọ ọrụ weebụngwá ọrụ ndị na-eme ka ọtụtụ ndị ọrụ nyeghachi nzaghachi.
5. Na-ekwu maka Ịkọ Akụkọ
Ụfọdụ ndị na-eche na ebe nrụọrụ weebụ ha na-enye ohere ikwu okwu gbasara azụmahịaakụkọ. N'adịghị ka nke a, ọ ga-agwa akụkọ ndị ọzọ ndị nwere ike irite uru site n'inweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụna-enye ya na saịtị ahụ. Ihe niile a bụ ihe akaebe ma kwuo n'ụzọ nghọta. Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ kwesịrị imeju ọdịiche dị mkpa,jiri ihe dị mfe na-agụ banyere uru ndị na-eme ka onye ọrụ ahụ baa uru.
6. Dee aha maka ụmụ mmadụ na ụlọ ọrụ ọchụchọ
Ọrụ ekwesịghị ịtinye ọtụtụ mkpụrụokwu n'ime ọdịnaya, ruo n'ókè na ọ ga-efunahụ yaihe ọ pụtara ma ọ bụ bụrụ onye a na-apụghị ikwu. Tinyere usoro ndị a n'ozuzu ederede na-egosi na ndị na-agụ ga-ahụ ọdịnaya ahụ. Ọzọkwa,iji mkpụrụ okwu na-anọchi anya iji dochie isi isiokwu dị iche iche adịghị agbanwe nkọwa mbụ nke ihe ọmụma ahụ.
7. Mee ihe edere ederede
Ná ngwụsị nke ọdịnaya ahụ, e kwesịrị inwe ederede na-agwa ndị ọbịa ihe nkwụsịha kwesiri iwere ya. Adreesị ozi-e ma ọ bụ kọntaktị na njikọ njikọ na-enye ohere dị mfe maka ndị ahịa mgbe azụmahịa ahụ ka dị n'elunke uche ha.
8. Mkpu Anya
Gụnyere ihe oyiyi ndị na-akwado, chaatị, na ihe atụ na-eme ka o doo anya na mbipụta ahụanya dị ka ọ bara uru. Ịgbaji ederede ma ọ bụ mmetuta dị ukwuu, ma ọ bụ iji akara ngosi na-abata n'aka ndị ọrụna ịhọrọ ịlele site na ederede. Mpempe akwụkwọ nke mbipụta nwere ọrụ dị oke mkpa iji rụọ ọrụ iji hụ na e nwere otu ihe ahụ.
9. Oge igbu oge
Ịmepụta oge nkwekọrịta maka ndị mmadụ na ndị otu na-ahụ na ọrụ ahụna-aga n'ihu. Otu ụzọ isi mee nke a bụ ịmekọrịta ihe e kere eke n'ime ihe ndị dị mkpa ma rụọ ọrụ n'otu n'otu n'otu oge. Ihe gbasara ngalabakwesịrị iso na nke mbụ ebe ọ na-esetị ụda ma chọpụta ihe ị ga-elekwasị anya ka ọrụ ahụ na-aga n'ihu. Oge nkwụsị aka enyeremgbe ị ga-edozi ọrụ maka nyochaa ya na ndị nweere òkè, na mgbe ị ga-achịkọta ọdịnaya niile n'ime saịtị ahụ.
Nchịkọta weebụsaịtị na-achọ oge iji tọọ atụmatụ na imejuputa usoro. Siten'ụzọ dị otú a, ọ na-adị mfe iji gosipụta àgwà na-enweghị nnwekọrịta na saịtị.